Volkswagen Bagyurdu OSB'den ọkpụkpọ oku bịara! - RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Aegean45 ManisaVolkswagen Bagyurdu OSB'den ọkpụkpọ oku bịara!
12 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 45 Manisa, Mpaghara Aegean, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Turkey 0
Volkswagene bagyurdu osbden òkù bịara
World of Volkswagen họpụtara itinye ego na 1.3 ijeri euro nke Manisa, Turkey Bağyurdu ahụ odude n'akụkụ region inye nkwado na suppliers nke akpakanamde ibu factory ngwaahịa òkù a si OSB.
1.3 ijeri euro maka Volkswagen si investments na Manisa, Turkey Bağyurdu dị mgbe nhọrọ nke n'ọnụ ụzọ nke suppliers inye nkwado ngwaahịa a òkù si OSB osisi.
Onye isi oche Bagyurdu Organised Industrial Zone (BAYOSB) Aydın Telseren, onye mere nyocha na okwu a kwuru na Volkswagen nke nnukwu ụgbọ ala German họpụtara Manisa maka ụlọ ọrụ mmepụta ya na ọ bụ nnukwu uru maka mba na mpaghara.
Amụtara na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nke a na-atụ anya na ọ ga-enye ọrụ maka ihe dị ka puku mmadụ 5 puku, chọrọ ka mpaghara ọha mmadụ, ụlọ, ụlọ agụmakwụkwọ na mkparịta ụka na-aga n'ihu, na ndị na-ebubata ya bụ ndị ga-ebunye nnukwu ihe, ihe na ngwaahịa nye nnukwu German amalitela ịchọ ebe.
Telseren kwuru na ọ bụ nnukwu ohere nye ala anyị ịbụ ọkacha mmasị maka ụdị ego a na usoro nsogbu anyị na-agabiga wee sị, “itinye ego ego ijeri euro 1.3 bụ uru maka obodo anyị n'onwe ya. Agbanyeghị, ọ bụkwa nnukwu uru maka mpaghara anyị na Manisa. Site na itinye ego a, 5 ga-eweta ohere ọrụ maka otu puku mmadụ ma mepụta ohere ọrụ dị ukwuu maka ụlọ ọrụ na-ebubata ihe na ndị na-ebubata ihe ga-enye nkwado ihe onwunwe maka ụlọ ọrụ mmepụta a. Bağyurdu OIZ bụ otu n'ime ebe kachasị adaba maka ndị na-ebubata ya si dị n'akụkụ ebe a na-emepụta ugbo ala ga-ehiwe na Manisa. BAYOSB bụ mpaghara kachasị adabara maka itinye ego ndị a na uru arụmọrụ ya, ogo dị elu na ike na-anaghị akwụsị akwụsị, ọrụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ, ndị ọrụ mgbakwunye ọzụzụ na ngwa mgbakwunye AY.
Onye isi oche BAYOSB Telseren kwuru na ha nwere ọtụtụ uru ebe ha nọ na Logistic Village nwere mita 500 ruo İzmir İstanbul, 57 km gaa ọdụ ụgbọ elu, linezmir-Ankara akara ụgbọ elu dị elu na n'akụkụ Manisa. BAYOSB bụ OSB kachasị adabara maka ndị na-eweta atụmatụ maka ịchụ ego Volkswagen na usoro ya, ụyọkọ igwe na ihe owuwu dabara adaba maka ụlọ ọrụ ụgbọ ala. Anyị na-atụ anya ndị niile na - akpata akụ na - azụ ahịa mpaghara anyị. Ọ bụrụ na ha tinye n'ọrụ, ha nwere ike ịmalite ịmalite ụlọ nrụpụta ha n'ime obere oge
Nkwado site na OSB maka usoro ọrụ ụgbọ okporo ígwè nke Manisa 02 / 10 / 2013 Nkwado site na OIZ maka ọrụ ụgbọ okporo ígwè Manisa: Cengiz Ergün, Mayor nke Manisa, natara Sait Türek, onyeisi oche nke OIZ Board, na ọfịs ya. N'oge nleta ahụ, a na-atụle mbipụta nke ịgbasa OIZ na okporo ígwè okporo ígwè nke President Ergün na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ. Türek; Nkwado nke OZ OZ President Türek kwuru na ha kwadoro oru ngo nke Manisa Municipality ma kwuo na ha nwere obi ụtọ na nzọụkwụ nke mgbasawanye nke OIZ. Onye isi oche OSB Sait Türek gara Mayor nke Manisa Cengiz Ergün n'ọfịs ya. N'oge nleta ahụ, Türek nyere Mayor Ergün onyinye mmanụ olive, ngwaahịa ọhụrụ nke Ụlọ ọrụ mmepụta mmanụ ya bụ Clover. N'oge nleta Türek ...
Eskişehir OSB na-akpọ mpempe ego na US Greenbrier Company 21 / 09 / 2017 Nadir Küpeli, onye isi oche nke Eskişehir OIZ Board of Directors, zigara onye isi ochichi Greenbrier akwụkwọ ozi na nso nso a, bụ onye mere usoro nyocha na Eskişehir ma kpọọ ụlọ ọrụ ahụ ka ha tinye ego na mpaghara ha. Ijere Mahadum Anadolu na Eskişehir, Fur National Rail Systems Research and Testing Centre (URAYSİM), tinyere ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ na mpaghara, yana ndị isi ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na ndị na-ahụ maka ndị na-ere ahịa na-agwa CEO nke Greenbrier Bill Furman, banyere ụdị ego ọhụrụ ahụ A kpọrọ òkù sitere na Nadir Küpeli, President nke Eskişehir OIZ. Eskişehir OIZ President Nadir Küpeli, na akwụkwọ ozi ọ kpọrọ nke CEO nke Greenbrier Bill Furman, kwuru, sị na mba anyị ...
German ụgbọ ala ibu Volkswagen Mee Factory Investment na Turkey 11 / 12 / 2018 German carmaker Volkswagen (VW), na-akwadebe itinye ego na a factory inye kwa afọ 5 puku ndị ọrụ Turkey. N'ihi na a mgbe na ọchịchọ na-eme ka ohere maka dị iche iche ụdị nke electric VW mmepụta ụlọ ọrụ dị na Germany, na o mere nhọrọ n'etiti Bulgaria na Turkey maka factory ego. German ụgbọ ala magazin na AutomobilWoche na ozi ọma, ọmụma na nka na ụgbọ ala mmepụta ke mba họrọ na-ekwu na Turkey dị irè. Na 2022 si Turkey osisi ga-arụmọrụ VW, Skoda na Seat ụdị ga-ibido na mmepụta nke na-na saịtị otu ke akpa itie. Odika 10 afọ chọ kwenye itinye ego na German ụgbọ ala ibu Volkswagen bụ karịa Turkey (VW) ...
Volkswagen Facility chọrọ Konya 01 / 07 / 2019 Konya Chamber of Commerce (KTO) President Selcuk Ozturk, "Anyị na-ulo oru German n'ichepụta ibu Wolkswagen nke mgbalị anyị iji kwadebe na mmepụta eweta atụmatụ Konya na Turkey," ka o kwuru. Odika 10 afọ na-arụ ọrụ iji mee ka Turkey itinye ego na German ụgbọ ala ibu Volkswagen (VW) bụ na ikpeazụ na. Kesinleşirk ụwa akpakanamde ibu Volkswagen ga itinye ego nke fọrọ nke nta na Turkey n'etiti anāchi achi malitere na-agba ọsọ iji kwadebe na mmepụta eweta nke obodo. Ọ malitere Volkswagen si Skoda na Seat na ozi ọma mmepụta ke Turkey ga-itinye ego ijeri euro 2 kpaliri Konya Chamber of Commerce na mmepụta eweta na-agbali iji nweta Konya. VW CEO Herbert Diess kwuru ...
ZONSİAD President Kwuru: 'Volkswagen kwesịrị itinye ego na Zonguldak' 04 / 07 / 2019 The kasị ibu n'ụwa One nke ụgbọ ala ụlọ ọrụ dabere na Germany Volkswagen Turkey họọrọ ọhụrụ osisi ma bụghị ma mere a na nkwupụta na Nsonye na akwụkwọ akụkọ ozi na-apụghị inye a mkpebi ikpeazụ na Zonguldak Industrialists 'na ndị ọchụnta ego si Association (ZONSİAD) onyeisi oche Khalil Ibrahim ECA; Zonguldak maka akpakanamde n'ichepụta na-ekwu na uru nke nile di iche iche nke ulo oru mbo, ndị nile so anyị Volkswagen auto osisi ke Turkey na destekliyoruz.de eme anyị n'ógbè Zonguldak, ECA kwuru na nkwupụta, na-emesi ike na obodo nwere uru nke nile di iche iche nke ulo oru mbo nke Zonguldak maka akpakanamde ego, Turkey Zonguldak bụ mpaghara mbụ nke Republic of Turkey.
Volkswagen na Turkey Elects New Factory 13 / 07 / 2019 German carmaker Volkswagen AG mkpebi itinye ego na ọhụrụ osisi e ji mee ihe ebe ọ bụ na Turkey. Volkswagen AG, bụ onye na-eduzi ụgbọala ukwu nke ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè Germany, amalitela ịmepe ụlọ ọrụ ọhụrụ ma na-achọ ohere maka ụlọ ọrụ a. Ebe ọkwa ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ, nke ga-abụ ọnụ ụzọ maka azụmahịa maka mmadụ 5 puku mmadụ, ama ọkwa ọkwa. Ụlọ ọrụ ahụ mechara mee mkpebi dị iche iche maka ụlọ ọrụ ọhụrụ. Volkswagen, nke gụnyere Audi, Skoda na oche, ga-emeghe ụlọ ọrụ ọhụrụ ya dị nso Izmir. Bulgarsit na-arụ ọrụ ruo ogologo oge na-ahọrọ n'etiti ndị Volkswagen'n factory ga-wuru gburugburu Izmir Turkey a zoputara. ...
Fethi Altunyuva: Njikọ ụgbọ okporo ígwè nke OSZ na OszığB na mpaghara akụrụngwa 09 / 01 / 2012 Firat Development Agency (FKA) Secretary General Fethi Altunyuva kwuru na ha na-enye aka na-arụ ọrụ nke ógbè nke mpaghara nakwa dị ka n'ụzọ na-enweghị isi. Altunyuva kwuru, sị: "N'ime usoro 2011 Year Financial Support Program maka Mma maka njem nleta na ọrụ mmepụta ihe, a ga-akwado ọrụ maka Elazığ OIZ njikọ ụgbọ okporo ígwè na ihe owuwu ụlọ ọrụ. Anyị debere nyocha nke IPA maka akụkụ nke ọrụ a na Ministry of Science, Technology na Industry na Ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Isi: News Pro
Gbanye ụzọ ụgbọ oloko na Gebze OIZ 12 / 09 / 2012 Obodo ukwu Metropolitan Mayor İbrahim Karaosmanoğlu, onye sonyere na nzukọ KSO, kwuru na ya zutere Prime Minista ịgbasa metro n'etiti Istanbul Kartal na Kadıköy ruo mgbe Gebze OIZ. A na-eme nzuko mpaghara nke Kocaeli (KSO) na ụlọ nzukọ nke Ụlọ Ahịa Ahịa. nzute; Obodo ukwu nke Mayor Ibrahim Karaosmanoglu, odeakwụkwọ bụ Ersin Yazici, bụ isi nke ndị ọkà mmụta sayensị Mustafa Altay, onye na-ahụ maka ndị isi obodo na ndị isi obodo na Gokmen Menguc, IZAYDAS General Manager Muhammet Sarac, sonyere ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Kocaeli. Ndị isi obodo gere ntị na nsogbu na ndị ọkachamara. EKWESỊRỤ NETWORK RAILWAY Ayhan Zeytinoğlu, na-ekwu okwu n'ọmụmụ ihe, na-achọ ịgbasa asọmpi na mmepụta ihe na Anatolia ...
Ulo oru akuko okporo-uzo na uzo ulo oru ulo ahia na-abia OIZs Bursa 07 / 01 / 2013 Ndị na-arụ ọrụ ụlọ ahịa na-abịa OSBs na ụgbọ okporo ígwè logistics Ụgbọ njem Minista Minista Binali Yıldırım mere ka njikọ nke ụgbọ okporo ígwè Gemlik na-eme njem na-agba ọsọ nke ụgbọ okporo ígwè dị elu. Ugbu a, mbipụta a agaala n'ihu. Ebe isi oche nke State Railways bụ ebe a na-edekọ ihe na mpaghara mpaghara ebe ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè dị elu nọ. Na isi na Bursa, 3 jikọtara na netwọk okporo ụzọ nke nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ndị na-arụ ọrụ ụlọ ahịa na-abata na Nhazi Ụlọ Ọrụ, NOSAB na DOSAB. Ebumnuche bụ ibubata ngwaahịa ndị a na-emepụta na mpaghara atọ ndị a dị na mpaghara ebe ụgbọ okporo ígwè na-achọ ihe dị mkpa ma na-ebute ha na ọdụ ụgbọ mmiri. Ụnyaahụ, onyeisi oche ndị isi obodo AK nke Sedat Yalçın'la na-ekwu okwu banyere ha, nwere obi ụtọ. ...
Ụgbọ okporo ígwè ndị ọrụ ahia na-abịa OIZ site na ntụgharị ụgbọ okporo ígwè 09 / 01 / 2013 Ulo oru ahia na-abia OIZ na ugbo ala oru ugbo ala: Ụgbọ njem Minista Binali Yildirim weputara njikọ nke ugbo ugbo ala Gemlik n'oge ememe nke ala ugbua. Ugbu a, mbipụta a agaala n'ihu. Ebe isi oche nke State Railways bụ ebe a na-edekọ ihe na mpaghara mpaghara ebe ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè dị elu nọ. Na isi na Bursa, 3 jikọtara na netwọk okporo ụzọ nke nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ndị na-arụ ọrụ ụlọ ahịa na-abata na Nhazi Ụlọ Ọrụ, NOSAB na DOSAB. Ebumnuche bụ ibubata ngwaahịa ndị a na-emepụta na mpaghara atọ ndị a dị na mpaghara ebe ụgbọ okporo ígwè na-achọ ihe dị mkpa ma na-ebute ha na ọdụ ụgbọ mmiri. Ụnyaahụ, onyeisi oche ndị isi obodo AK bụ Sedat Yalcin na-agwa ha okwu, nwere obi ụtọ. "... ndị OSB
Bağyurdu Haziri Mpaghara Mpaghara
Ndị na-agba ụwa
Manisa Bağyurdu Ahaziri Mpaghara Mpaghara
Nkwado site na OSB maka usoro ọrụ ụgbọ okporo ígwè nke Manisa
Eskişehir OSB na-akpọ mpempe ego na US Greenbrier Company
German ụgbọ ala ibu Volkswagen Mee Factory Investment na Turkey
Volkswagen Facility chọrọ Konya
ZONSİAD President Kwuru: 'Volkswagen kwesịrị itinye ego na Zonguldak'
Volkswagen na Turkey Elects New Factory
Fethi Altunyuva: Njikọ ụgbọ okporo ígwè nke OSZ na OszığB na mpaghara akụrụngwa
Gbanye ụzọ ụgbọ oloko na Gebze OIZ
Ulo oru akuko okporo-uzo na uzo ulo oru ulo ahia na-abia OIZs Bursa
Ụgbọ okporo ígwè ndị ọrụ ahia na-abịa OIZ site na ntụgharị ụgbọ okporo ígwè